Fomba fitsaboana biby: ahoana ny fanampiana ny Alpacas amin'ny zaza | safidy
ny Jakob Horvat 29. Septambra 2017, 12: 12 13.7k Views
Miantso ny zaza mafy loha sy mitebiteby mampientam-po, eo anelanelan'ny "Vady" vitsivitsy sy "Aahs" vitsivitsy. Rehefa misintona ny bisikiletany ny fianakaviana fito mianadahy, dia mety hitranga izany. Raha toa ny alàlan'ny alàlan'ny fianakavian'i Horvat ankehitriny ny fitsangatsanganana, dia mifangaro amin'ny rivotra mafana mafana ny zaza. Zazalahy efatra eo anelanelan'ny sivy sivy taona, ny zokiny telo dia nihazakazaka tsy nisy fangarony. Dimy taona i Tim ary izy no faharoa faralahy indrindra tamin'ny fotoana fohy. Manelingelina azy izany, hoy ny ray aman-dreniny. Nandositra izy ka niafina tao ambadiky ny hazo iray. Minitra vitsy taty aoriana dia nitazona ny Alpaca Fritz izy, nanao toy izany koa ireo rahalahiny ary mikarakara an'i Lars sy Fibo. Ary tampoka: mangina. Gaga be i Papa Thomas tamin'ny fandinihana nataony: "Tamin'ny faharoa, rehefa niaraka tamin'ny biby izy ireo dia tony ny zanako lahy. Azontsika atao ny mandrefy izany miaraka amin'ny metatra DB. Io maraina io ary hatramin'ny vao maraina be dia mbola faly be ry zareo. Tena milamina ry zareo izao. Mihevitra aho fa mampientanentana ahy toy ny ahy. "
Mieritreritra, malaza sy fluffy
Alpacas dia avy amin'ny fianakavian'ny rameva ary avy any Andes any Amerika Atsimo. Efa ela izy ireo dia teraka tany Aotrisy, ary natokana ho an'ny volon'izy ireo fluffy. I Gabriele Horvat dia mitazona alpaka dimy eo amin'ny kijana ao Karlstetten any Lower Aotrisy, ilay "toerana fahazavana Alpakas" - tena ankasitrahany manokana ny toetran'ny biby tena ambony indrindra: "Navoakan'i Alpacas ny karazana tony manokana izay tian'ny olona. Ianao dia mahatsapa ny ahiahy, ny adin-tsaina ary ny adin-tsaina amin'ny fiainana andavanandro dia mikoriana fotsiny ihany raha vao manakaiky ny biby. Izay no nahatonga ahy raiki-pitia tamin'ny alpaka. "Amin'ny maha-mpanazatra sy manome hery azy, dia matetika izy no miresaka amin'ny olona iharan'ny fanerena toy izany amin'ny fiainana andavan'andro. Ka nanana ny heviny izy hizara ny traikefa tsara ananany amin'ny alpaka amin'ny ho avy, hoy izy. Gabriele Horvat sy ny zanany vavy, Laura, dia nanolotra hetsika fialam-boly anaovana biby amin'ny sehatry ny consulting sy coaching mandritra ny herintaona. Na koa hoe andro fitsangatsanganana an-tsekoly. Na amin'ny fotoam-pianakaviana iray amin'ny andro sabotsy hariva - toa ilay fianakaviana Aigner.
INFO: fitsaboana biby
Ny fiaraha-miasa amin'ny biby dia ampiasaina amin'ny foto-pifehezana marobe, anisan'izany ny psychotherapy, pedagogy, psikolojia ary ny fanofanana ny fiainana. Ny fitsabahana amin'ny biby dia teny isam-piaraha-miasa amin'ity asa ity. Na dia tsy voafetran'ny lalàna aza ny fampiasana ny teny hoe "therapy", manjary saro-pady izany satria mifandray akaiky amin'ny mombamomba ny tena izy ary noho izany amin'ny fampiofanana manokana. Ny The European Society for Animal assisted Therapy (ESAAT) dia mamaritra izany toy izao manaraka izao: "Therapy Therapy Therapy" dia misy fikasana momba ny fanabeazana, ara-tsaina ary socio-integrative nomanina miaraka amin'ny biby ho an'ny ankizy, ny tanora, ny lehibe sy ny olon-dehibe manana fahasembanana ara-tsaina, ara-tsosialy ary môtô. Tafiditra ao koa ny fepetra hampiroboroboana ny fahasalamana, fisorohana ary fanarenana. "
Ny vokatry ny biby ho an'ny olona dia nohazavain'i Helga Widder, Tale Mpitantana ny fikambanana "Biby toy ny fitsaboana" miaraka amin'ny hypotsis biofilia an'i Edward O. Wilson: "Isan'ny zavaboary isika ary, toy izany koa, dia tafiditra ao anatin'ny tsingerin'ny natiora. Izany dia manome vatofohy instinctual ary fifandraisana akaiky sy tsy fahatsiarovan-tena miaraka amin'ireo fizotran-javatra izay maneho ny fikorianan'ny natiora. "Manazava ny lalindalina lalina sy tsy takatry ny saina eo amin'ny olombelona sy ny biby izany. "Amin'ireo fitsabahana ataon'ireo biby ireo hiasa dia tsy maintsy misy fifandraisana akaiky eo amin'ny tompon'ny biby sy ny biby fiompiny. Tsy maintsy mifankahita am-pitokisana ianao ary matoky tanteraka, avy eo afaka mampiditra olon-kafa ao amin'io fifandraisana io koa ianao. "
Ny fitsabahana ataon'ireo biby dia omena andrim-panjakana tsy miankina any Aotrisy, saingy tsy omen'ny fiantohana ara-pahasalamana. Ho an'i Helga Aries, dia mety ho teboka manan-danja izany: "Raha mijery ny fahombiazanao amin'ny fiantraikany tsy misy dikany ianao dia tokony hampiasa matetika kokoa ny fitsabahana amin'ny biby."
Ny biby dia taratry ny fihetseham-po
Tim lahy dimy taona amin'ny fiakarany miaraka amin'i Alpaka Fritz, iray amin'ny "Spotlight Alpacas" nosoratan'i Gabriele sy Laura Horvat.
Tim dimy taona dia mbola mitazona an'i Alpaca Fritz, miara-mandeha aminy amin'ny lalana maloto mamakivaky ny havoana be karaha manodidina an'i Karlstetten. Fa maninona Fritz, manontany azy aho. "Nifidy an'i Fritz aho satria tsapako fa namako izy. Izy koa dia manana palitao tsara tarehy sy fotsy ary mangatsiatsiaka toy izany. ”Ny fijery tsy azo antoka tamin'ny voalohany dia nanome lalana hatoky tena sy matoky tena. "Manaraka ahy eo amin'ny tongotra izy." Indro, hoy aho, andao dia ho avy izy, hoy i Tim. Tsy izany foana akory, satria ny alpacas tena saro-pantarina, tsapao ny toe-tsaina izay entin'ny mpiara-miasa amin'izy ireo haneho azy ireo sy taratry izy ireo. I Laura Horvat, zanakavavin'i Gabriele, dia nahatsikaritra izany matetika: "Arakaraka ny maha-be fitiavana sy manaja ny fitantanana ny biby dia ny fandanjalanjana, ny fialan-tsasatra ary ny tsara kokoa hitondrany." , Avy eo mety hitranga fa mijanona fotsiny ny alpaca ary tsy manao na inona na inona mihitsy. "Raha ny tsindry ataon'ireo ankizy ary mihevitra izy ireo fa tokony hanitatra ny felany, dia mety ho an'ny mpiara-mianatra izany fa tsy ho an'ny biby. Ny fanekena ao amin'ny Rumpelstielzchenmanier dia zavatra iray manokana: tsy fahatokisana. "
Biby sarobidy, ankizy matoky tena
Ho an'ny ankizy noho izany dia fahatsapana miavaka manokana ny hahatsapany ny firindran'ny biby. "Tsy mitraka ny biby ary tsy manome lanja", hoy ny fanazavan'i Gabriele Horvat, "manao firaisana amin'ny ankizy iray izy ireo toy ny hafa rehetra. Amin'ny sehatra interpersonal, ny ankizy dia matetika no miangatra na antenaina, fa ny alpacas kosa dia mampiseho ny tena toetrany. Ny sandan'ny biby dia raisina ho toy ny toe-po fototra. Ankehitriny, raha toa ny ankizy iray izay sarotra amin'ny fifandraisany amin'ny hafa dia mahomby amin'ny fifaneraserana amin'ny biby, dia mahazo fahatokisana tena izy. Ary mety hisy fiantraikany amin'ny sehatra hafa koa izany, toy ny fianarana any am-pianarana. "
Raha niresaka momba an-tsekoly: ny mpampianatra sekoly voalohany Ilse Schindler dia mitantara tantara mahaliana, izay nanao fitsangantsanganana niaraka tamin'ny iray kilasy ary ny "Alpakas point point" an'ny fianakavian'i Horvat: "Nisy lehilahy iray, raha tsy izany dia very maina sy mora taitra, dia nandeha niaraka tamin'ny iray alpaka. Saiky tsy voatsindrin'ny olona izy io ary nosakanany tamin'ny tendany lava ny ezaka ataontsika hikapoka imbetsaka. Ity bandy ity irery ihany no navela hitazona ny tendany nandritra ny fotoana tsy voafetra. Tena nirehareha sy faly izy satria faly be izy niaraka tamin'ilay biby. Raha tsy izany, tsy dia niainany izany matetika. "
Fahatsapana bebe kokoa ho an'ny filan'ny hafa
Raha i Tim dia faly fa "efa nahazo ny Bussi fahefatra" avy tamin'i Fritz, i Thomas Aigner, ilay lehilahy ao amin'ny fianakaviana dia mandray ny leash avy ao amin'ny Alpaka Lars. "Mandrora ve izy ireo?", Hoy izy nanontany tena. "Izao raha manelingelina azy fotsiny ianao. Na raha miady kilalao herinaratra miaraka amin'izy ireo izy ireo, dia tsy tokony hijoro eo ianao ”, hoy ny navalin'i Laura.
Ny Alpacas dia misy fiantraikany manokana amin'ny olon-dehibe. Thomas Aigner dia mpahay siansa ary manana teolojia efa vonona: "Hitako amin'ny alàlan'ny fihaonana amin'ilay biby, ilay tsy mahery setra, ary ny fifandraisana ilaina amin'ny fanentanana ilaina. Ny iray mianatra mandinika ny filan'ny biby, mba hamaliana azy ireo. Raha tsy manao an'izany ianao dia tsy ho lasa lavitra amin'ny biby. Io no manofana ny filan'ny hafa. Azo afindra amin'ny fifampiraharahana amin'ny olona ihany koa izany. "
Therapy biby ho an'ny Alpaca - Manao fandinihana mampihetsi-po aho mandritra ny alahady mandeha miaraka amin'ny "Lichtpunkt Alpakas" sy ny fianakavian'ireo mpitsoa-ponenana Syriana Hussein (niova ny anarana).
Manao fandinihana mampihetsi-po aho mandritra ny alahady mandeha miaraka amin'ny "Lichtpunkt Alpakas" sy ny fianakaviana mpitsoa-ponenana Syriana Hussein (niova ny anarana). Helikoptera mivezivezy amin'ny alin'ny fahavaratra any Karlstetten. Farah, valo taona, taitra, mijery, eo anelanelan'ny fiaramanidina sy Papa Kaled. Niresaka teny fampaherezana vitsivitsy tamin'ny teny arabo izy ary manazava hoe: "Tao Syria dia nahita bara be iray nolavin'ny helikoptera izy. Betsaka ny olona maty. Matahotra izy, irery eo alohan'ny tabataba. "
Nefa tsy ela, nirenireny niverina tany Alpaca Fritz ny masony, izay notazoniny ny leash. Mijery an'i Farah ilay biby ary manana maso lava sy mahiratra, manao feo malefaka sady mampientam-po toy ny nahatsapa fiovana tampoka. Gaga i Papa Kaled: «Tsy nandry fatratra mihitsy izy. Ny mandeha miaraka amin'ny alfasas dia mampitony azy be. Mino aho fa ny fanaovana izany matetika dia afaka manampy azy ireo hanadino ny tahotra nentin'izy ireo avy any Syria. "
INFO: Biby mety amin'ny fitsaboana biby
Alika: Ny mpiara-miasa ara-tsosialy olombelona taloha dia afaka mamaky antsika ary koa tsy misy biby hafa. Alika azo ampiofanina tsara ny alika, tena ilaina ny fitenin'ny vatana.
Soavaly: Soavaly dia saro-pady ary mamaly haingana be amin'ny olona manana taratry ny toe-pony. Indrindra indrindra amin'ny fananganana ny fahatokisan-tena dia mety tsara.
Alpacas: malaza amin'ny toetrany manan-tsaina sy tsara sy tsara. Mamelatra fihavanana manokana ny biby.
Paka: manana fe-potoana fohy ara-tsosialy fohy ao anatin'ny herinandro vitsivitsy; Na azo ampiasaina ho an'ny fidiran'ny biby ampianarina amin'ny biby dia miankina amin'ny fomba nametrahana ny fifandraisany amin'ny olombelona nandritra io vanim-potoana io.
Snaody: mivoaka avy ao an-tranony raha tsy hoe milamina ary tsara; Afaka mianatra ny ho tonga tony ny ankizy satria te hivoaka ny osy;
Photo / Video: Horvat.
Nosoratan'i Jakob Horvat
Previous article Clicktivism - fandraisan'anjara amin'ny tsindrio
Lahatsoratra manaraka Mihinana amin'ny pellets
Bebe kokoa avy amin'ny: fahasalamana
Josef Wolfsteiner, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe "Bio-Jocki", no tompon'ny fianakavian'ny fianakaviana ...